Tag: dowlada | Sagal Radio Services
Dowlada cusub ee Talyaaniga oo sheegtay in dalkeeda ka saarayso dadka soo galootiga ah
Sagal Radio Services • News Report • June 3, 2018
Wasiirka cusub ee Arrimaha Gudaha dalka Talyaaniga Matteo Salvini ayaa u digey dadka soo galootiga ah ee ku nool dalka Talyaaniga isagoo ugu baaqay inay boorsooyinkooda xirxirtaan.
Soomaaliya oo ogolaatay in Xulufada Sacuudiga hogaamiyo ay isticmaalaan Hawada iyo Badda
Dowladda Soomaaliya ayaa u ogolaatay Xulufada uu Sacuudiga hogaamiyo inay isticmaalaan Hawada iyo Badda, si ay uga weeraraan Jabhada Xuutiyiinta ee isku dayaya inay xoog ku qabsadaan dalka Yemen oo dhan.
Dowladda Soomaaliya oo ka War-bixisay Khasaarihii Weerarkii Madaxtooyada
Sagal Radio Services • News Report • July 9, 2014
Dowladda Somalia ayaa faah-faahin ka bixisay khasaarihii ka dhashay weerarkii xalay ay xoogagga Al-shabaab ku bartilmaameedsadeen dhismaha madaxtooyada Soomaaliya, iyadoo dowladdu ay sheegtay in la dilay dhammaan kooxihii weerarka soo qaaday.
Dowlada oo ka aamusan dagaalka ku saleesan Qaab beeleedka ee la isku adeegsanayo Hubka Dowlada ee kasocda Sh/Hoose
Dowlada Soomaaliya ayaa wali ka hadlin dagaaladii ugu dambeeyay ee ka dhacay Deegaano hostaga Magaalada Marka ee Xarunta Gobolka Sh/Hoose kaa oo u dhaxeeyay Ciidamo kawada tirsan Dowlada balse u abaabulan qaab beeleed.
Madaxtooyada Somaliya oo si kulul ubeenisay warbixinta Monitoring Group soo saartay
Sagal Radio Services • News Report • February 16, 2014
Afhayeenka madaxweynaha Dalka Injineer C/raxmaan Cumar Yariisoow ayaa waxa uu ka hadlay eedeyntii dhawaan usoo jeedisey Kooxda Monitoring Group isagoo sheegay in warbixintaasi ay ahayd mid been abuur ah.
Dowlada oo ka war bixisay wax yaabihii xalay ka dhacay Magaala Muqdisho
Sagal Radio Services • News Report • February 4, 2014
Mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Somalia ayaa ka hadlay duqeymihii xalay loo geystay qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir, iyagoo sheegay inay madaafiicdu ahaayeen kuwo macmal ah oo aan geysan wax khasaare ah.
Dowladda Somalia oo soo dhaweysay in Itoobiya ay ku biirto AMISOM
Sagal Radio Services • News Report • January 23, 2014
Abaanduulaha ciidamada xoogga dalka, Jen. C/risaaq Khaliif Cilmi ayaa soo dhaweeyay ka mid noqoshada ciidamada Itoobiya ay ka mid noqdeen kuwa Midowga Afrika ee AMISOM, isgaoo xusay in tani ay isbedel weyn ku sameynayso dagaallada looga horjeedo kooxda Al-shabaab.
Dowladd Soomaaliya ayaa markii ugu horreysay ka hadashay ajaanibta dalka ku sugna oo qaarkood la afduubay, iyadoo sheegtay in ajnabigii aan dowladda u diiwaan-gashnayn wixii ku dhaca aysan mas’uul ka ahayn.
Dowladda Soomaaliya ayaa ka digtay dhibaatada nolosheed ka dhalan karta xayiraadda uu bangiga Barclays ee dalka Britain uu kusoo rogay xawaaladaha Soomaalida.